Fampiasana medikaly tsara indrindra ny mpanamboatra sy ny orinasa Sp Spondbond Nonwoven | Henghua
Ny lamba fitsaboana tsy vita tenona dia matetika vita amin'ny kofehy filamenan'ny polypropylene amin'ny alàlan'ny fanerena mafana. Manana fofonaina tsara, fitehirizana ny hafanana, fihazonana ny hamandoana ary fanoherana ny rano ..
Ny lamba fitsaboana tsy vita amin'ny rongony dia matetika vita amin'ny kofehy filamenan'ny polypropylene amin'ny alàlan'ny fanerena mafana. Manana fofonaina tsara, fitehirizana ny hafanana, fihazonana ny hamandoana ary fanoherana ny rano ..
2.Ny lamba tsy tenona dia karazan-damba tsy tenona, izay mampiasa mivantana polipitra polymer, kofehy fohy na filamente hamoronana fibre amin'ny alàlan'ny airflow na ny harato mekanika, ary avy eo dia mandalo hydroentangling, manindrona fanjaitra, na manamafy fanamafisam-peo, ary farany mahavita Ny lamba tsy tenona vokatr'izany. Karazana vokatra vita amin'ny fibre vaovao miaraka amina rafitra malefaka, mifoka rivotra ary fisaka. Ny tombony dia satria tsy mamokatra potipotika fibre izy io, matanjaka, mateza ary malefaka malefaka. Izy io koa dia karazana fitaovana manamafy, ary manana fahatsapana landihazo koa izy io. Raha ampitahaina amin'ny lamba landihazo, ny kitapo lamba tsy tenona dia mora volavolaina ary mora vidina
3Fanafody rano sy azo tsofinaina: ny rano polypropylene dia tsy mifoka rano, manana elongation aotra ary manana fanalefahana rano tsara. Izy io dia voaforona fibre 100% ary porous sy air-permeable. Mora ny mitazona ny lamba ho maina ary mora hosasana. Tsy misy poizina ary tsy mahasosotra: Ny vokatra dia novokarina niaraka tamin'ny akora ara-tsakafo FDA, tsy misy singa simika hafa, manana fahombiazana azo antoka, tsy misy poizina, tsy misy fofona ary tsy mahasosotra ny hoditra. Mpikambana miady amin'ny bakteria sy anti-simika: Polypropylene dia volo simika simika, tsy lanin'ny samoina, ary afaka mitoka-monina ny harafesin'ny bakteria sy bibikely ao anaty ranoka; ny bakteria, ny harafesin'ny alkaly ary ny tanjaky ny vokatra vita dia tsy ho voan'ny erosion. Antibacterial. Ny vokatra dia miaro amin'ny rano fa tsy miendrika bobongolo ary afaka mitoka-monina ireo bakteria sy bibikely ao anaty tsiranoka amin'ny fikaohon-tany ary tsy mamy. Toetra ara-batana tsara. Izy io dia vita amin'ny kofehy vita amin'ny polypropylene ary nivelatra mivantana tamin'ny harato ary mifamatotra amin'ny thermally. Ny tanjaky ny vokatra dia tsara kokoa noho ny an'ny vokatra vita amin'ny fibre mahazatra.
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny sosona voalohany sy fahatelo amin'ny sarontava, miaraka amin'ny famaritana 25g * 17.5cm, izay misy vokany tena tsara. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny akanjo fitsaboana sy satroka ara-pahasalamana miaraka amin'izay, izay afaka misoroka ny fidiran'ny bakteria sy hahatratrarana vokatra miaro
Teo aloha: Ny fambolena dia mampiasa PP Spunbond Nonwoven
Lamba fitsaboana tsy tenona
Lamba tsy tenona, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Vidin'ny lamba lamba, Fitaovana tsy tenona, Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Pp lamba tsy tenona,